भित्री मुद्रण निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरु संग चीन बक्स तल पाउच - Rijing Techtronic
घर > उत्पादनहरू > लचिलो प्याकेजिङ्ग > फ्ल्याट बटम पाउच > भित्री मुद्रणको साथ बक्स तल पाउचहरू
RJ PACK ले विश्वको शीर्ष लचिलो प्याकेजिङ्ग आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक भएकोमा ठूलो गर्व गर्दछ, समृद्ध अनुभवको साथ, हामी तपाईंलाई प्याकेजिङ्ग समाधान प्रदान गर्न पेशेवर छौं। आन्तरिक मुद्रणको साथ बक्स तल पाउचहरू हाम्रो विशेष मुद्रण प्रक्रिया हो। साधारण बक्स तल्लो पाउचहरूसँग तुलना गर्दा, PE को भित्री तह पनि ढाँचाहरूसँग प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। भित्री मुद्रणको साथ बक्स तल पाउचहरू तपाईंको उत्पादनहरू भण्डारण र प्रदर्शन गर्नको लागि उत्तम समाधान सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको हो। बाहिरी र भित्री भागमा कुल 10 प्रिन्टिङ सतहहरू छन्, जसले तपाईंको डिजाइनलाई सबैभन्दा ठूलो हदसम्म देखाउन सक्छ। कृपया हामीबाट भित्री मुद्रणको साथ बक्स तल्लो पाउचहरू किन्नुहोस्।
भित्री मुद्रणको साथ बक्स तल पाउचहरू तपाईंको उत्पादनहरू भण्डारण र प्रदर्शन गर्नको लागि उत्तम समाधान सिर्जना गर्न डिजाइन गरिएको हो। बाहिरी र भित्री भागहरूमा कुल 10 प्रिन्टिङ सतहहरू छन्, जसले तपाईंको डिजाइनलाई सबैभन्दा ठूलो हदसम्म देखाउन सक्छ।
बाह्य मुद्रणको विपरीत, आन्तरिक मुद्रणमा केही सामग्री सीमितताहरू छन्। यसले जटिल ढाँचाहरू छाप्न सक्दैन, तर सरल र निरन्तर ढाँचाहरू मात्र छाप्न सक्छ। भित्री प्रिन्टिङका ​​साथ बक्स बटम पाउचहरू बजारमा असामान्य झोलाहरू हुन्, जसले तपाईंको ब्रान्डको नयाँ छाप प्रदान गर्न सक्छ।
3. भित्री मुद्रण सुविधा र अनुप्रयोगको साथ बक्स तल पाउचहरू
५) भित्री प्रिन्टिङ सहितको बक्स तल्लो पाउचहरू प्याकिङ स्न्याक्स, पाल्तु जनावरको खाना, कफी, चिया, सिजनिङ, चामल आदिमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
4. भित्री प्रिन्टिङ विवरणहरू सहित बक्स तल्लो पाउचहरू
5. भित्री मुद्रण योग्यता संग बक्स तल पाउच
६. भित्री प्रिन्टिङको साथ बक्स तल्लो पाउचहरू वितरण, ढुवानी र सेवा
म भित्री मुद्रणको साथ बक्स तल्लो पाउचहरूको अर्डर मात्रा अनुसार 20 - 40 दिन लाग्नेछु
हामीसँग BRC, HACCP, SGS र ISO छ। र हामीसँग आन्तरिक मुद्रणको साथ यी वातावरणीय बक्स तल्लो पाउचहरूको लागि पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोस्टेबल प्रमाणपत्रहरू छन्।
हट ट्याग: भित्री मुद्रण, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, स्टकमा, नि: शुल्क नमूना, ब्रान्ड, चीन, चीन, मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण, CE, FDA, थोक, खरीद, अनुकूलित, थोक, सस्तो, छुट, कम मूल्य, फेसन, सबैभन्दा नयाँ, गुणस्तर, उन्नत, नवीनतम बिक्री, फैंसी, वातावरणीय